I-Ultrasonic Pectin Extraction evela ku-Fruit ne-Bio-Waste - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-pectin ayinhlanganisela yokudla okusetshenziswe kaningi kakhulu, ikakhulukazi eyongezwa ngemiphumela yayo yokugaya.
Isizinda se-ultrasonic sandisa isivuno kanye nekhwalithi ye-pectin izitshalo kakhulu.
I-Sonication yaziwa ngenqubo yayo yokuqinisa imiphumela, eseyisebenzise kakade ezinkambisweni eziningi ezimbonini.
I-Pectin ne-Pectin Extraction
I-Pectin iyi-polysaccharide eyinkimbinkimbi yemvelo (i-heteropolysaccharide) etholakala ikakhulukazi ezindongeni zeseli zezithelo, ikakhulukazi ezithelo ze-citrus kanye ne-apple pomace. Okuqukethwe okuphezulu kwe-pectin kuyatholakala ezitshalweni zezithelo zombili we-apula nezithelo ze-citrus. Ipomace ye-Apple iqukethe u-10-15% we-pectin ngesisekelo esomile ngenkathi ikhasi le-citrus liqukethe ama-20-30%. Ama-pectin aphikisanayo, ahlaziywa futhi avuselelwe futhi akhombisa izindawo ezinhle zokugaya nokuqina, okwenza kube nesithasiselo esibaluleke kakhulu. Ama-pectin asetshenziselwa kakhulu ukudla, izimonyo nemikhiqizo yezokwelapha njenge-rheology modifier njenge-emulsifier, i-agent agent, i-agent agent, i-stabilizer, ne-thickener.
I-pectin ejwayelekile yezizinda zezicelo zezimboni zenziwa ngokusebenzisa izinqubo ze-acid-catalyzed (esebenzisa i-nitric, i-hydrochloric noma i-sulfuric acid). I-extra-catalysed extraction yinkqubo ejwayelekile kunazo zonke ekukhiqizeni kwe-pectin yezimboni, ngoba amanye amasu okufakelwa okufana nokupheka okuqondile (60ºC-100ºC) kuze kube ngu-24hrs kanye ne-pH ephansi (1.0-3.0) ayashesha futhi ephansi ekuvuneni futhi angabangela ukushisa ukuchithwa kwe-fibre ekhishwe futhi isivuno se-pectin ngezinye izikhathi sinqunyelwe yizimiso zenqubo. Kodwa-ke, isizinda se-asidi-catalyzed seza nezinkinga zayo, futhi: Ukwelapha okunamandla okuyingozi kudala ukuxolisa nokuchithwa kwemithi yamaketanga e-pectin, okuthinta ikhwalithi ye-pectin ngokungalungile. Ukukhiqizwa kwemithombo enkulu ye-acluc effluent kudinga ukwelashwa kokubuyiswa kwemithi nokuvuselela okubizayo okwenza inqubo ibe ngumthwalo wemvelo.
Isizinda se-ultrasonic yindlela yokwelashwa emnene, engezona ezishisayo, esetshenziselwa izinqubo zokudla eziningi. Mayelana nokukhishwa kwe-pectin ezivela izithelo nemifino, indodanaication iveza i-pectin yekhwalithi ephezulu. I-pectin ephuma nge-Ultrasonically ihamba kahle nge-anhydrouronic acid yayo, okuqukethwe kwe-methoxyl ne-calcium pectate kanye ne-degree yayo ye-esterification. Izimo ezincane zesikhumba se-ultrasonic zivimbela ukuchithwa okushisayo kwamapectin azwela ukushisa.
Ikhwalithi ye-Pectin nokuhlanzeka kungahluka kuye ngokuthi i-anhydrogalacturonic acid, i-degree of esterification, okuqukethwe komlotha we-pectin ekhishwe. I-pectin enesisindo esikhulu samangqamuzana nomlotha ophansi (ngaphansi kuka-10%) okuqukethwe nge-anhydrogalacturonic acid (ngaphezulu kuka-65%) kuthiwa yi-quality quality pectin. Njengoba amandla okuphathwa kwe-ultrasonic angalawulwa ngokunembile, izakhiwo ze-pectin ezikhishwe zingathonywa ngokulungisa ama-amplitude, izinga lokushisa lokushisa, ukucindezela, isikhathi sokugcina kanye ne-solvent.
Isizinda se-Ultrasonic singasetshenziswa ngokusebenzisa okuhlukahlukene Izixazululo ezifana namanzi, i-citric acid, isisombululo se-nitric acid (i-HNO3, i-pH 2.0), noma i-ammonium oxalate / oxalic acid, okwenza kube lula ukuhlanganisa u-sonication emigqeni ekhona ye-extraction (i-retro-fit).
Ultrasonic i-pectin i-extracts ihamba phambili nge:
ikhono eliphezulu lokugaya
Imfucuza yezithelo njengomthombo: I-ultrasound esebenzayo isetshenziswe kakade ukuhlukanisa i-pectin kusuka ku-apple pomace, i-citrus fruit peels (njenge-orange, i-lemon, i-grapefruit), i-pomace yamagilebhisi, igromegranate, i-sugar beet pulp, i-dragon fruit peel, i-cladodes yama-pear, futhi imango peels.
I-Ultrasonic flow-through reactor
nciphisa isikhathi sokukhipha
Ukulungiswa kabusha kwe-retro kungenzeka
I-Hielscher Ultrasonics ingumlingani wakho wezinqubo zesikhumba kusuka ku-botanicals. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukukhipha imali encane yokucwaninga nokuhlaziywa noma ukucubungula imiqulu emikhulu yokukhiqiza ukuhweba, sinombonisi ofanelekayo we-ultrasonic. Wethu Amaprosesa we-ultrasonic lab kanye nathi bench-top kanye nezimboni ze-industrial ultrasonicators ziqinile, zisebenziseka kalula futhi zakhiwe ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi komthwalo ogcwele. Ububanzi obubanzi Izesekeli ezifana ne-sonotrodes (i-proxy ultrasonic / izimpondo) ezinobukhulu obuhlukene nobubunjwa, amaseli okugeleza nezigameko kanye nezikhuni zivumela ukusetha okuhle kuwe inqubo ethile yokukhipha.
Zonke imishini ye-ultrasonic yedijithali ifakwe isibonisi sokuthinta okumibala, i-SD Card edidiyelwe ye-othomathikhi yedatha yokulandelela, kanye nesilawuli esilawuliwe esikude sokuqapha inqubo ephelele. Ngezinhlelo ze-ultrasonic ze-Hielscher eziyinkimbinkimbi, ukuhlelwa kwezinqubo eziphezulu nokulawulwa kwekhwalithi kwenziwa lula.
Xhumana nathi namhlanje ukuxoxa ngezidingo zenqubo yakho yokukhipha! Sizokujabulela ukukusiza ngokuhlangenwe nakho kwethu okuhlala isikhathi eside emithini ye-botanical extractions!
Imiphumela Yokucwaninga ye-Ultrasonic Pectin Extraction
Imfucuza yamatamatisi: Ukuze ugweme izikhathi eziningana zokufakelwa (12-24 h) ngokufaka inqubo ye-refluxing, i-ultrasonication yasetshenziselwa ukuqinisa inqubo yesikhamo ngesikhathi (15, 30, 45, 60 no-90 min). Kuye ngezikhathi zokukhipha, i-pectin etholakalayo yenzalo ye-ultrasonic isigaba sokuqala, lapho izinga lokushisa lika-60 ° C ne-80 ° C lingama-15.2-17.2% futhi liyi-16.3-18.5%, ngokulandelana. lapho kusetshenzwa isinyathelo sesibili se-ultrasonic, isivuno se-pectin kusuka ku-tomato udoti senyuke sibe ngu-34-36%, kuye ngokuthi izinga lokushisa nezikhathi). Ngokusobala, isizinda se-ultrasonic sandisa ukuphuphuka kwetamatisi cell wall matrix, okuholela ekusebenzisaneni okungcono phakathi kwezinto ezihlukanisiwe nezikhishwe.
Ama-pectin akhishwe ku-ultrasonical angahlukaniswa njengama-pectin aphezulu we-methoxyl (HM-pectin) anezinto ezisethiwe ezisheshayo ze-gelling (DE > 70%) kanye ne-degree esterization of 73.3-85.4%. n. Okuqukethwe kwe-calcium pectate ku-pectin ekhishwe ngokulinganisa kukalwe phakathi kuka-41.4% kuya ku-97,5%, kuye ngamakhompiyutha wokukhishwa (izinga lokushisa nesikhathi). Ekushiseni okuphezulu kokukhishwa kwe-ultrasonic, okuqukethwe kwe-calcium pectate kuphezulu (91-97%) futhi njengokufana okubalulekile kwekhono le-pectin gelling kuqhathaniswa nokukhipha okuvamile.
Isizinda esivamile solvent for isikhathi 24hr sinikeza efanayo pectin isivuno uma kuqhathaniswa nemithi engu-15 ultrasonic ukwelashwa. Ngokuqondene nemiphumela etholakalayo kungaphetha ngokuthi ukwelashwa kwe-ultrasonic kunciphisa isikhathi sokukhipha ngokuphawulekayo. I-spectroscopy ye-NMR ne-FTIR iqinisekisa ukuthi kukhona i-pectin eningi eqinisekisiwe kuwo wonke amasampuli ahloliwe. [Grassino et al. 2016]
Isifiso sesithelo sesithelo: Izitshalo zokukhiqiza, i-galacturonic acid ne-esterification degree zazibhekwa njengenkomba yekhono lokukhishwa. isivuno esiphezulu se-pectin esitholwe yi-ultrasound-aided extraction kwakungu-12.67% (izimo zokukhishwa 85ºC, 664 W / cm2, i-pH 2.0 ne-10 min). Kulezi zimo ezifanayo, ukukhishwa okujwayelekile okushisa kwenziwa futhi umphumela waba ngu-7.95%. Lezi ziphumo zihambisana nezinye izifundo, ezibika isikhathi esifushane sokukhishwa okuphumelelayo kwe-polysaccharides, kuhlanganise ne-pectin, i-hemicelluloses namanye ama-polysaccharide angenawo amanzi, asekelwa yi-ultrasound. Kwaphinde kwaqaphela ukuthi ukukhiqizwa kwesitokisi kwanda kakhulu ngo-1.6 lapho lesi sikhumba sasizwa yi-ultrasound. Imiphumela etholakale yaboniswa ukuthi i-ultrasound yayiyikhono elisebenzayo le-saving for time for the extraction of pectin kusuka passion passion peel. [Freitas de Oliveira et al. 2016]
I-Prickly Pear Cladodes: I-Ultrasonic yasiza isizinda (UAE) se-pectin kusuka ku-Opuntia ficus indica (OFI) i-cladodes ngemuva kokususwa kwe-mucilage yayizame ukusebenzisa indlela yokuphendula phezulu. Izinqubo eziguquguqukayo zenziwe ngcono nge-isovariant central composite design ukuze kuthuthukiswe isivuno se-pectin. Isimo esiphezulu esitholakalayo yilezi: isikhathi se-sonication 70 min, izinga lokushisa 70, i-pH 1.5 kanye ne-water-material ratio 30 ml / g. Lesi simo siqinisekisiwe futhi ukusebenza komkhiqizo wokuhlola kwakuyi-18.14% ± 1.41%, eyayisondelene kakhulu nenani elibikezelwe (19.06%). Ngakho-ke, isizinda se-ultrasonic sikhombisa okunye okuthembisayo kuhlelo lokujwayelekile lokukhipha isibhamu ekusebenzeni kwalo okuphakeme okufinyeleleke ngesikhathi esincane nangaphansi kwamazinga aphansi okushisa. I-pectin ekhishwe yi-ultrasonic isizinda esivela ku-OFI i-cladodes (UAEPC) inezinga elincane le-esterification, okuqukethwe okunama-acid okungapheliyo, izindawo ezibalulekile zomsebenzi kanye nomsebenzi omuhle wokulwa. Le miphumela ifaka ukusetshenziswa kwe-UAEPC njengengenelelo engaba khona embonini yokudla. [Bayar et al. 2017]
I-Pomace yamagilebhisi: Ekhasini lokucwaninga "Isizinda esisizwa nge-ultrasound yamapectin kusuka ku-pomace yamagilebhisi usebenzisa i-citric acid: indlela yokuphendula indlela yokuphendula", i-sonication isetshenziselwa ukukhipha i-pectin kusuka ku-pomace yamagilebhisi ne-citric acid njenge-agent yokukhipha. Ngokusho kwe-Response Surface Methodology, isivuno esikhulu se-pectin (~32.3%) singatholakala uma inqubo yesikhumba se-ultrasonic yenziwa ku-75ºC ngamaminithi angu-60 isebenzisa isixazululo se-citric acid se-pH 2.0. Lezi polysaccharides ze-pectic, eziqanjwe ikakhulukazi yi-galacturonic units units (~97% wezeshukela eziphelele), zinesisindo samangqamuzana esiyi-163.9kDa nesilinganiso se-esterification (DE) esingu-55.2%.
I-surface morphology ye-pomace yamagilebhisi e-sonicated ibonisa ukuthi i-sonication idlala indima ebalulekile ekusweleni izicubu zemifino nokuthuthukisa isivuno se-extraction. Isivuno esitholakale ngemuva kwesimiso se-ultrasonic se-pectin besebenzisa izimo ezilungile (75 ° C, 60 min, pH 2.0) yayingu-20% ephakeme kune-isivuno esitholakale lapho lesi sakhiwo sisebenzise izimo ezifanayo zokushisa, isikhathi ne-pH, kodwa ngaphandle usizo lwe-ultrasonic. Ngaphezu kwalokho, i-pectin evela kusizinda se-ultrasonic iphinde ikhombise isilinganiso esiphezulu sesisindo samangqamuzana. [Minjares-Fuentes et al. 2014]
Bayar N., Bouallegue T., Achour M., Kriaa M., Bougatef A., Kammoun R. (2017): Isizinda se-Ultrasonic se-pectin kusuka ku-Opuntia ficus indica cladodes ngemuva kokususwa kwe-mucilage: Ukulungiswa kwezimo zokuhlola nokuhlolwa kwamakhemikhali nokusebenza izakhiwo. Ultrasonic pectin isizinda kusuka prickly eliphakathi kwe cladodes. I-Chemistry Yokudla 235, 2017.
I-Raffaella Boggia, i-Federica Turrini, i-Carla Villa, iChiara Lacapra, i-Paola Zunin, i-Brunella Parodi (2016): Ukukhishwa Okuhlaza Okuvela Kwempomegranate Marcs ekukhiqizeni Ukusebenza Kokusebenza Nezimonyo. Imithi (Basel). 2016 Dec; 9 (4): 63.
UCibele Freitas de Oliveira, Diego Giordani, uRafael Lutckemier, uPoliana Deyse Gurak, uFlorencia Cladera-Olivera, uLigia Damasceno Ferreira Marczak (2016): Ukukhipha i-pectin kusuka ekuthandweni kwesithelo sezithelo esizisiwe yi-ultrasound. LWT – Isayensi Yezokudla Nezobuchwepheshe 71, 2016. 110-115.
U-Antonela Nincevic Grassino, uMladen Brncic, i-Drazen Vikic-Topic, i-Suncica Roca, i-Maja Dent, i-Suzana Rimac Brncíc (2016): Isizinda esisiziwe nge-Ultrasound nokuhlukaniswa kwe-pectin kusuka ekutheni imfucumfucu. Ukudla Chemistry 198 (2016) 93-100.
I-Krauser, i-S .; I-Saeed, A .; Iqbal, M. (2015): Izifundo eziqhathaniswayo ezivamile (Amanzi-Amanzi Acid) nezinqubo ezingezona ezivamile (Ultrasonication) Izinqubo zokuqothula kanye nokwaziswa kwamakhemikhali we-Pectin kusuka ku-Peel Waste of Mango I-Cultivar Chausna. I-Pak. J. Bot., 47 (4): 1527-1533, 2015.
I-R. Minjares-Fuentes, A. Femenia, MC Garaua, JA Meza-Velázquez, S. Simal, C. Rosselló (2014): Ukukhipha ama-pectin e-ultrasound kusuka ku-pomace yamagilebhisi usebenzisa i-citric acid: Indlela yokuphendula indlela yokuphendula. I-Carbohydrate Polymers 106 (2014) 179-189.
I-Pectin iyi-heteropolysaccharide evamile ngokwemvelo, etholakala kakhulu ezintweni ezifana ne-apple pomace nezithelo ze-citrus. I-pectin, eyaziwa nangokuthi i-pectic polysaccharides, igcwele i-galacturonic acid. Phakathi kweqembu le-pectic, kunezibalo eziningana ze-polysaccharides ezitholakale. I-Homogalacturonans yizintambo ezilinganayo ze-D-galacturonic i-α- (1-4). I-galacturonans esetshenzisiwe ibonakala ngokutholakala kwezinsalela ze-saccharide appendant (njenge-D-xylose noma i-D-apiose kumacala afaneleko we-xylogalacturonan ne-apiogalacturonan) yokuhlanganisa kusuka emgodleni we-D-galacturonic acid residu. I-Rhamnogalacturonan I-pectin (RG-I) iqukethe umhlane we-disaccharide ophindayo: 4) -a-D-galacturonic acid- (1,2) -a-L-rhamnose- (1. Izinsalela eziningi ze-rhamnose zinezitshalo ezihlukahlukene zamashukela angathathi hlangothi Izitshalo ezingathathi hlangothi ziyi-D-galactose, i-L-arabinose ne-D-xylose. Izinhlobo nezinani zamashukela angathathi hlangothi zihluka ngemvelaphi ye-pectin.
Olunye uhlobo lwesakhiwo se-pectin yi-rhamnogalacturonan II (RG-II), okuyinto ephikisayo, ebizwa ngokuthi i-polysaccharide kakhulu futhi engatholakali kakhulu emvelweni. Umgogodla we-rhamnogalacturonan II uqukethe kuphela ama-D-galacturonic acid units. I-pectin ehlanganisiwe inesisindo samangqamuzana ngokuvamile angu-60,000-130,000 g / mol, ehlukahluka ngemvelaphi nezimo zesikhumba.
Ama-pectin asengezo ebalulekile ngezicelo eziningi zokudla, kumakhemisi, nakwezinye izimboni. Ukusetshenziswa kwama-pectins kuncike emandleni ayo aphezulu okwenza ijeli phambi kweCa2+ ama-ion noma i-solute ku-pH ephansi. Kunezinhlobo ezimbili zama-pectins: i-low-methoxyl pectin (LMP) ne-high-methoxyl pectin (HMP). Izinhlobo ezimbili ze-pectin zihlukaniswa yi-degree yazo ye-methylation (DM). Ngokuncika kwi-methylathion, i-pectin ingaba yi-pthoin ephezulu ye-methoxy (DM>50) noma i-pactin ephansi ye-methoxy (DM<50). I-peptin ephezulu ye-methoxy ibonakala ngokukwazi kwayo ukwakha ama-gels endaweni ye-acidic (pH 2.0-3.5) ngaphansi kwesisekelo esivumelana ne-okungenani i-55 wt% noma ngaphezulu. I-peptin ye-methoxy ephansi ingakha ama-gels ngaphezulu kwebanga le-pH elikhudlwana (2.0-6.0) phambi kwe-ion ehlukahlukene, efana ne-calcium.
Ngokuphathelene ne-gelation ye-high-methoxyl pectin, ukuxhumanisa kwesimo samangqamuzana e-pectin kwenzeka ngenxa yokuhlangana kwe-hydrogen nokuhlangana kwe-hydrophobic phakathi kwama-molecule. Nge-low-methoxyl pectin, i-gelation itholakala ekuxhumaneni kwe-ionic ngokusebenzisa amabhuloho e-calcium phakathi kwamaqembu amabili e-carboxyl angamaketanga amabili ahlukene ngokusondelana komunye nomunye.
Ifaka i-pH enjalo, ukuba khona kweminye iminyakazo, usayizi wamangqamuzana, ubungako be-methoxylation, inani kanye nesikhundla samaketanga aseceleni, kanye nokukhokhiswa kwabantu kule molekyuli kuthonya izakhiwo ze-pionin. Kunezinhlobo ezimbili zama-pectins ngokuya ngokuthambeka kwawo. Kukhona i-pectin engangeni amanzi noma i-pectin yamahhala ne-pectin engamanzi. Amanzi we-Pectin-solubility ahlobene nesilinganiso sawo se-polymerization kanye nenani kanye nesikhundla samaqembu e-methoxyl. Ngokuvamile, ukunyibilika kwamanzi kwe-pectin kukhuphuka ngesisindo esinciphile futhi kunyuke emaqenjini e-carboxyl aqinisekisiwe. Kodwa-ke, i-pH, izinga lokushisa, kanye nohlobo lwe-solute yamanje nethonya lokuncibilika.
Ikhwalithi uma i-pectin esetshenziselwa ukuthengisa ivame ukunqunywa kakhulu yi-dispersability ukwedlula ngokushibilika kwayo ngokuphelele. Lapho i-pectin eyimpuphu eyomile ifakwa emanzini, kuyaziwa ukwakha lokho okuthiwa “Izinhlanzi-Amehlo”. Lezi zinhlanzi-amehlo ziyiziqaqa ezakhiwa ngenxa yokugeleza okusheshayo kwefulawa. “Iso lezinhlanzi” ama-clumps anomugqa we-pectin owomile, ongenamanzi, ohlanganiswa ungqimba lwangaphandle olunamanzi amaningi. Ukuqhuma okunjalo kunzima ukumanzisa kahle futhi kusakazeka kuphela kancane.
Embonini yokudla, i-pectin yengezwa kuma-marmalade, kusakazeka izithelo, ujamu, ujellies, iziphuzo, amasoseji, ukudla okuqandisiwe, i-confectionery, nemikhiqizo yebhikawozi. I-Pectin isetshenziswa kuma-confectionery jellies ukunikeza isakhiwo esihle se-gel, ukuluma okuhlanzekile kanye nokukhipha ukukhishwa okuhle kwe-flavour. I-Pectin isetshenziselwa futhi ukuqinisa iziphuzo ze-acidic protein, ezinjengokuphuza iyogathi, ukuthuthukisa ukuthungwa, ukuzizwa umlomo kanye nokuqina kwamapuliphu iziphuzo ezenzelwe ujusi nanjengendawo enamafutha ezimpahla ezibhakiwe. Ngekhalori-encishisiwe / ephansi-ikhalori, ama-pectin afakwa njengokufakwa esikhundleni kwamafutha kanye / noma ushukela.
Embonini yezemithi, isetshenziselwa ukunciphisa amazinga we-cholesterol yegazi nokuphazamiseka kwesisu.
Okunye ukusetshenziswa kwezimboni kwe-pectin kufaka phakathi ukusetshenziswa kwayo kumafilimu adliwayo, njenge-emulsion stabilizer ye-emulsion yamanzi / yamafutha, njenge-rheology modifier ne-plasticizer, njenge-ejenti yokufaka amaphepha nezindwangu njll.
Yize i-pectin ingatholakala ezindongeni zeseli zezitshalo eziningi, i-apula pomace ne-orange peel ziyimithombo emibili emikhulu yama-pectin akhiqizwa kwezentengiso ngoba ama-pectin abo asezingeni elikhulu. Eminye imithombo ikhombisa ukungaphatheki kahle kwe-gelling. Ezithelweni, ngaphandle kwe-apula nosawolintshi, amapetshisi, ama-apricots, amapheya, ama-guavas, ama-quince, ama-plums nama-gooseberry ayaziwa ngenani labo eliphakeme le-pectin. Phakathi kwemifino, utamatisi, izaqathe, namazambane kwaziwa ngokuqukethwe kwabo okuphezulu kwe-pectin.
Izigidi zamathani wamatamatisi (i-Lycopersicon esculentum Mill.) Zicutshungulwa minyaka yonke ukukhiqiza imikhiqizo enjengo utamatisi, i-paste, i-purée, i-ketchup, isoso kanye ne-salsa, okuholela ekudalekeni kwenqwaba yemfucumfucu. Imfucumfucu yamatamatisi, etholakala ngemuva kokucindezela utamatisi ibunjwe ngembewu engama-33%, isikhumba esingu-27%, no-40% uginindela, kuyilapho i-pomace eyomisiwe yamatamatisi iqukethe imbewu eyi-44% kanye ne-56% pulp nesikhumba. Ukungcola utamatisi kungumthombo omuhle ukukhiqiza ama-pectins.